Ezona nkqubo zibalaseleyo ze-Android kunye ne-iPhone yee-smartphones, iitafile, ii-iPads
Ezona zixhobo ziLungileyo
Ukuba ujonge zakutshanje iindaba kunye nophononongo kwi ii -apps ezilungileyo zefowuni okanye ithebhulethi yakho, emva koko ufike kwindawo efanelekileyo. Apha e-Foro KD, siza kukugcina usexesheni kuzo zonke izinto ezikhutshwayo ze-app zamva nje kwaye sikunike uluvo lwethu olunyanisekileyo malunga nokuba zeziphi ezikufanele ixesha lakho. Nokuba ungumsebenzisi we-iOS okanye we-Android, sikuphathele. Ke jonga umva rhoqo kuzo zonke iindaba zamva nje zeapp kunye nophononongo!
Ezinye ii -apps ziyilelwe ukwenza ubomi bube lula, ngelixa ezinye ziyilelwe ukonwabisa okanye ukwazisa. Nje, Usetyenziso lunokuba zizixhobo eziluncedo kakhulu ezinceda abantu balawule ubomi babo ngeendlela ezahlukeneyo.
Banokwenza ubomi bethu bube lula kwaye busebenze, ngokusinika ulwazi kunye nezixhobo esizidingayo xa sisendleleni. Banokusinceda sihlale sinxibelelana nabahlobo kunye nosapho lwethu, ngokusinika indlela yokuhlala sinxibelelana ngelixa sisendleleni. Ukongeza, izicelo eziphathwayo zinokusinceda uhlale usempilweni kwaye ufanelekile, ngokusinika ulwazi kunye nezixhobo zokulandela umkhondo wethu inkqubela yokomelela kunye neenjongo.
Yeyiphi eyona app ilungileyo yokubala phantsi?
Yeyiphi eyona app ilungileyo yokubala ixesha elivakalayo?
Yeyiphi eyona app ilungileyo yokubala i-sobriety?
Yeyiphi eyona app ilungileyo yokubala i-anime?
Yeyiphi eyona app ilula yokubala ilahleko?
Yeyiphi eyona app yokumba i-faceaway countdown?